एमाले र माओवादी एकताको सहमति: आज पार्टी एकताको घोषणा हुने ! – Etajakhabar
एमाले र माओवादी एकताको सहमति: आज पार्टी एकताको घोषणा हुने !
काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भएको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच पद बाँडफाँडमा कुरा मिलेपछि दुई पार्टीबीच एकीकरण गर्ने सहमति भएको हो।
ओली र प्रचण्डबीच सरकारका नेतृत्व आलोपालो गर्ने, कार्यकारी अधिकारसहित दुवै नेता पार्टी अध्यक्ष हुने सहमति भएको छ। पद बाँडफाँडको गाँठो फुकेसँगै नयाँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता घोषणा गरेर एउटै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताउनुभयो। पहिलो चरणमा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
दुई दलबीच नयाँ बन्ने पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने सहमति भएको छ। पार्टीको अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको समान हैसियत हुनेछ। ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड हुने भएका छन्। अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने वाम गठबन्धन बनाउँदादेखिकै सहमतिअनुसार पाँच वर्षे कार्यकालमा दुवै आधा–आधा समय प्रधानमन्त्री हुनेछन्।
नयाँ बन्ने पार्टीको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ र पार्टीको राजनीतिक दर्शन माक्र्सवाद र लेनिनवाद रहने भएको छ। दुई वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने र एकता महाधिवेशनसम्म पार्टीको कार्यदिशाका विषयमा समाजवाद उन्मुख नयाँ कार्यदिशा निर्माण र संगठनात्मक संरचनाबारे गृहकार्य गर्न दुई कार्यदल बनाउने सहमति जुटेको छ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ०३, २०७४ समय: १०:१७:३५